Paulo Dybala oo Instagram-kiisa ku soo bandhigay wixii uu qabanayey, xilli la sheegay inuu ku dhacay Coronavirus – Gool FM
Paulo Dybala oo Instagram-kiisa ku soo bandhigay wixii uu qabanayey, xilli la sheegay inuu ku dhacay Coronavirus
(Buenos Aires) 14 Mar 2020. Paulo Dybala ayaa dadka la socda la wadaagay muuqaal isagoo karsanaya cuntada dhaqanka dalkiisa Argentina, intii lagu guda jiray markii la sheegay in laga helay Coronavirus ee la karaantiilay.
Dybala ayaa ku sugan keli noolaasho maalmahan kaddib markii saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Rugani laga helay cudurka ‘coronavirus’.
Kubad sameeyaha Kooxda Juventus ayaa leh waxyaabo uu hiwaayado ahaan u haysto oo uu ku qaadan karo maalmaha uu garoommada ka maqan yahay.
Juventus iyo Dybala ayaa labaduba beeniyay wararka xanta ah ee sheegaya in xiddiga reer Argentina laga helay caabuqa coronavirus, waxaana uu shaaciyey uu u muuqdo mid caafimaad qaba oo deggan haatan.
Dybala ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay muuqaa isagoo karsanaya cunto dhaqameedka dalkiisa Argentina, waxaana uu u muuqday mid aad u fiican, isagoo xitaa suulka gacantiisa u taagay taagay kaamirada, kaddib markii uu foornada raashinka lagu kariyo ku xareeyey cundada.
Qoraalkii uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka ayaana u dhignaa: “Cunto dhaqameedka Argentine inta lagu gudajiray karantiilka!”